Shiinaha jir Steel nidaam-diidanaa in la xirrira saarayaasha mashiinka iyo alaab | Zhongtuo
mashiinada jir House
Mashiinka albaabka Birta
Shelf toolmoonu iyo mashiinka guddi
mashiinka weelka guriga
Highway biraha ku Machine
Steel Water Downspout Roll U samaynta Machine
Square biyaha hoos Mashiinka qaadashada biibiile roob la ...
biibiile roob Square samaynta mashiinka la laabaya mashiinka ...
Pre-furitaanka tarooli loading iyo straightener of kitaabkii duudduubnaa ...
Si buuxda automatic culus purline waajib stacker mashiinka f ...
jir Steel nidaam-diidanaa in la xirrira mashiinka
jir Steel nidaam-diidanaa in la xirrira mashiinka nidaamka jir Steel? Ha noo bilaaban hordhac kooban oo ku saabsan nidaamka jir steel. rogid Main la xirrira waa mid ka mid ah hababka jir steel. nidaamka biraha Steel waa wax soo saarka ah qayb shirkadda, line gaar ah oo duudduuban la xirrira, waxaan ka guuxayay ka jawaabaan karin inuu abuuro isagoo line kitaabkii duudduubnaa ee la xirrira oo la qabsan kartaa shuruudaha shirkadaha iyo qabsado baahidaada. Our is haysta tababari doonaan shaqaalaha si loo yareeyo ogaado mashruuca si aad u halkaas ku dhameysan by yaraynta scra ...
Nidaamka jir Steel ?
Ha noo bilaaban hordhac kooban oo ku saabsan nidaamka jir steel. rogid Main la xirrira waa mid ka mid ah hababka jir steel. nidaamka biraha Steel waa wax soo saarka ah qayb shirkadda, line gaar ah oo duudduuban la xirrira, waxaan ka guuxayay ka jawaabaan karin inuu abuuro isagoo line kitaabkii duudduubnaa ee la xirrira oo la qabsan kartaa shuruudaha shirkadaha iyo qabsado baahidaada. Our is haysta tababari doonaan shaqaalaha si loo yareeyo ogaado mashruuca si aad u halkaas ku dhameysan by yaraynta duugga ah iyo shaqaale si fiican u la kordhiyo tayada. Sida ugu dhakhsaha badan si dhakhso ah aan qaadan shuruudaha iyo badbaadin aad waqti shirkadda iyo lacag. Qaado sawirada soo socda si aad tixraac in la ogaado waxa laga yaabaa by diidanaa mashiinka la xirrira.
By sawirada soo socda, aynu hubiyo sida uu diidanaa shuqullada sameynta :
Oo mishiinka diidanaa in la xirrira sida caadiga ah waxay leedahay laba rollers nooca: rullaluistemadka siman iyo rollers toosan. Kuwa soo socda shows sawirka rollers siman habka of mishiinka rogid ugu weyn ee la xirrira ka shaqeeya.
Tusaale ahaan: mashiinka purline C, ama haraaga iyo mashiinka track, sida caadiga ah oo kaliya ay isticmaalaan rollers siman ka dibna ay ku dhameysan karaan habka rogid.
Rollers taagan :
rollers taagan sida caadiga ah ee profiles adag sida mashiinka qaadashada tuubooyin bir ah, kuwa qumman hayayaashii samaynta mashiinka iyo kuwa kale. The sawiro socda tuso rollers taagan nidaamka shaqada:
Tusaale ahaan mashiinka meesha biyomareenka wareega nus isticmaalaa pass badan oo rollers toosan:
In eray, diidanaa in la xirrira mashiinka waa kiro ah in la beddelo strip bir in profile la doonayo, waayo,
In this article, kaliya muujinaya fikrad qaar ka mid ah mishiinka rogid la xirrira ugu weyn, ee soo socda articles, waxaan ka badan ka hadlaan jir Steel nidaamka more diidanaa mashiinka la xirrira.
Previous: Weelka mashiinka rogid column hayayaashii guriga version xoog leh 4.0mm dhumucdiisuna max
Next: Si buuxda automatic culus waajib stacker mashiinka purline for dhumucdiisuna waxay puline kor 3.0mm
C60-300 buuxda Automatic hagaajin C Purline Fo ...
Cangzhou Zhongtuo Roll U samaynta Makiinado Co., Ltd.
Machine Making biibiile
S: Tim, waxaan tageen inay soo iibsadaan qaar ka mid ah biibiile godka caag ah, iyo ka dib eegaya nooc oo dhan, madaxayga bilaabay in waxyeello. Waxaan go'aansaday inuu ka tago dukaanka iyo cilmi qaar ka mid ah. Waxaan heystaa dhowr mashruuc kaas oo aan u baahan tahay biibiile caag ah ....
Evening Update: Trans Mountain r dhuumaha ...
Mawduuca ku saabsan yahay kuwaas oo si dhab ah oo daacad u ah Garsoore Sare mana talin doona ama ku soo qiyaastaas oo aan loo aabo yeelin. Golaha Liberal ayaa dib-u-ansixiyey ballaarinta dhuumaha Trans Mountain, kaas oo ku dari lahaa ku dhawaad ​​600,000 ba ...
Markii qaar ka mid ah tijaabiyeyaal our dhawaan qaaday Giant ee TCR Advanced SL1 Pro for wareejin ah, laftiisa cadeeyay inuu yahay mashiin dhab ah oo cajiib ah in dalab walba oo aad rabto in aad ka lahaa tartanka a thoroughbred. Laakiin waxa aad expe karaa ...
bakhaarada oversea ee Hindiya iyo South ...
Waxaan, ZHONGTUO Roll U samaynta Makiinado lagu iibin waxyaabaha our in ka badan 60 dal iyo Meelaha, gaar ahaan India iyo South America. Waxaan nahay awood iyo kalsooni leh our Roll U samaynta Machine in ka dhigi doonaa ...
rogid Cold la xirrira isticmaalka mashiinka nolosha
Marka ay timaado in erayada rogid qabow mashiinada la xirrira, inta badan dadka aan aqoon. Laakiin marka ay timaado in dhismaha guryaha, ee maalin kasta aan ma ka bixi kartaa. Qaado mashruuca Brazile ah tusaale ahaan t an ...
Guide - Products Hot - Sitemap - amp Mobile
Stud Track Machine, Sheet saqafka Machine Making Tile, Line Tube Hg50, Machine Step Making Tile , Rolling shutter Door Roll U samaynta Samaynta Makiinado , waxaad huwataa Birta U samaynta Makiinado ,